ဒီတစ်ပတ်မှာ အားရစရာ ဂိမ်းအသစ်တွေထက်စာရင် update တွေပိုများတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆော့ဖြစ်သလောက် ဂိမ်းအသစ်တွေကတော့….
iOS အတွက်တော့ 2017 ကတည်းကထွက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် iOS သမားတွေကတော့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတော့ Google Play Store ကိုရောက်လာခဲ့ပြီး free download ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် family မှာကတည်းက ဆော့လာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ mobile ပေါ်ရောက်သွားတဲ့ SF သည်ရုပ်ထွက် အတော်လေးဆိုးပါတယ်။ ကျွန်တော့အနေနဲ့ကာတော့ ကောင်းလားဆိုးလား ဝေခွဲမရဖြစ်နေတုန်းပဲ။ game play ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပထမ၃ပွဲလောက်ပဲ free ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ character တွေအကုန်လုံးဝယ်ရပါလိမ့်မယ်။ free ဆိုပေမယ့် intro ပဲရတဲ့သဘောပေါ့။ fan စစ်စစ်တွေကတော့ ဝယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ iOS မှာတော့ ခုချိန်ထိ $5 နဲ့ဝယ်ရပါလိမ့်မယ်။
Ketchapp ဆိုတဲ့ developer ကိုကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အေးဆေးတဲ့ ဂိမ်းတွေထုတ်တတ်ပါတယ်။ Dunk Line ဟာ basketball ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဒီမှာတော့ ခြင်းထဲဝင်အောင် တိုက်ရိုက်ပစ်ထည့်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်က လိုင်းတွေဆွဲပြီးလိုက်ကူရတဲ့သဘောပေါ့။ ဘောလုံးတစ်လုံးထဲကတော့ ဘာအရေးလဲ..အေးဆေးပေါ့…နောက်ပိုင်း များလာရင်တော့ ခက်လာပါလ်ိမ့်မယ်။ level တစ်ခုမှာ line ကို ၃ခုပဲပေးဆွဲပါတယ်။ ဒီတော့ စိတ်အေးအေးထားပြီး လိုင်းတွေဆွဲပေါ့။ ရိုးရိုး arcade ပဲဖြစ်ပြီး f2p ဖြစ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာတွေတော့ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
First person runner ဖြစ်ပြီးတော့ စစချင်းမှာ အသားကျအောင်တော်တော်လေးလုပ်ယူရသလိုပဲ။ motion sickness ဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေကတော့ အန်ကောင်းအန်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဟေးဟေး…။ဒီတစ်ခုက ကျွန်တော့ အတွက်တော့ သိပ်လွယ်တဲ့ထဲမပါဘူး။ (ကျန်တာတွေလည်းသိပ်တော့မထူးပါဘူးလေ 😛 )။ endless ပြေးနေရတာမဟုတ်တာတော့ ကောင်းတယ်ထင်တယ်။ မိနစ်ပိုင်းလေးတွေနဲ့ ခွဲထားတဲ့ level တွေထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကြော်ငြာ video တွေဝင်လာတာကတော့ နည်းနည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကိုဖယ်မယ်ဆိုရင်လည်း $10 လောက်ပေးရမှာဆိုတော့ ….ဝှူး….
ALto’s Adventure ကိုတော့ ဆော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးလောက်ပါပြီ။ endless runner game တစ်မျိုးပါပဲ။ ဒီတစ်ခုက Adventure ပြီးတော့ Odyssey ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ်။ ဒီဂိမ်းထွက်လာဖို ၃နှစ်အချိန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါတောင် android အတွက် မထွက်သေးပါဘူး။ ရက်ကိုလည်းကြေငြာထားတာမတွေ့မိပါဘူး။ ပုံမှန် comeptative mode, အေးအေးဆေးဆေး Zen mode နဲ့ photo mode ဆိုပြီးတော့ ပါပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ $5 နဲ့ iOS အတွက်ရပါပြီ။
Ski Jumping Pro ဆိုတာ အခုမှထွက်လာတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင် 2013 လောက်ကတည်းကရှိနေခဲ့ပြီးသားပါ။ 11th February ကထွက်လာတဲ့ update မှာတော့ 3D အစစ်ဖြစ်သွားကြောင်းနဲ့ slow motion replay ပါလာပါတယ်။ gyro ဒါမှမဟုတ် touch ၂ မျိုးလုံးနဲ့လည်း ထိန်းလို့ရလာတယ်။ character customization လည်းကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရလာပါတယ်။ အခု 22nd feb မှာတော့ ဂိမ်းက အတော်ငြိမ်သွားပါပြီ။ 1.8GB download ဖြစ်ပြီး f2p ဖြစ်ပါတယ်။ Sponsor points တွေမဝယ်မချင်းတော့ f2p ပေါ့။ ကြော်ငြာကြည့်ရင်းလည်းရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
RPG player တွေအတွက်တော့ တကယ်အဆင်ပြေမယ့် turn-based RPG တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ game mechanic တွေကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကိုရှင်းပြသွားတာအတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ Ninetail ကထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် မူရင်းက ကိုရီးယားဘာသာနဲ့ပဲရနိုင်ပေမယ့် english version ထွက်လာတဲ့အခါ english ကိုတကယ်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်က ဘာသာပြန်ပေးထားပုံရပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကိုယ်တိုင်လည်း level 10 ပဲရှိပါသေးတယ်။ multiplayer မရပါဘူး။ pub မှာတော့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ connection လည်းလိုပါတယ်။ ပျော်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။ grinding လည်းနည်းနည်းတော့လုပ်ရပါလ်ိမ့်မယ်(RPG မဟုတ်လား)။ Storage ကိုတော့ သတိထားစေချင်ပါတယ်။ မလောက်ပါဘူး။ ပစ္စည်း အတော်များများက မဝယ်လည်း တဖြည်းဖြည်းတော့ရလာပါလိမ့်မယ်။ Chapter တွေက boss-based ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီ boss ကိုသတ်ဖို့လိုပါတယ်။ မနိုင်သေးရင် grinding ပြန်လုပ်…ပြန်ချပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် $1 ပေးဝယ်ရတာကတော့ တန်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ၊ တစ်ခြား update တွေလည်းရှိတော့ရှိပါသေးတယ်။ အများစုကတော့ ဆော့လက်စဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ပတ်မှပဲပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ။
ဒီတဈပတျမှာ အားရစရာ ဂိမျးအသဈတှထေကျစာရငျ update တှပေိုမြားတယျထငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဆော့ဖွဈသလောကျ ဂိမျးအသဈတှကေတော့….
iOS အတှကျတော့ 2017 ကတညျးကထှကျခဲ့ပွီးသားဖွဈတဲ့အတှကျ iOS သမားတှကေတော့ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီတဈပတျထဲမှာတော့ Google Play Store ကိုရောကျလာခဲ့ပွီး free download ရပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ family မှာကတညျးက ဆော့လာတဲ့သူတှအေတှကျကတော့ mobile ပျေါရောကျသှားတဲ့ SF သညျရုပျထှကျ အတျောလေးဆိုးပါတယျ။ ကြှနျတော့အနနေဲ့ကာတော့ ကောငျးလားဆိုးလား ဝခှေဲမရဖွဈနတေုနျးပဲ။ game play ကတော့အဆငျပွပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပထမ၃ပှဲလောကျပဲ free ရမှာဖွဈပွီးတော့ ကနျြတဲ့ character တှအေကုနျလုံးဝယျရပါလိမျ့မယျ။ free ဆိုပမေယျ့ intro ပဲရတဲ့သဘောပေါ့။ fan စဈစဈတှကေတော့ ဝယျဖွဈပါလိမျ့မယျ။ iOS မှာတော့ ခုခြိနျထိ $5 နဲ့ဝယျရပါလိမျ့မယျ။
Ketchapp ဆိုတဲ့ developer ကိုကွားဖူးပါလိမျ့မယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ အေးဆေးတဲ့ ဂိမျးတှထေုတျတတျပါတယျ။ Dunk Line ဟာ basketball ဂိမျးတဈခုဖွဈပမေယျ့ ဒီမှာတော့ ခွငျးထဲဝငျအောငျ တိုကျရိုကျပဈထညျ့ရတာမြိုးမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျက လိုငျးတှဆှေဲပွီးလိုကျကူရတဲ့သဘောပေါ့။ ဘောလုံးတဈလုံးထဲကတော့ ဘာအရေးလဲ..အေးဆေးပေါ့…နောကျပိုငျး မြားလာရငျတော့ ခကျလာပါလိမျ့မယျ။ level တဈခုမှာ line ကို ၃ခုပဲပေးဆှဲပါတယျ။ ဒီတော့ စိတျအေးအေးထားပွီး လိုငျးတှဆှေဲပေါ့။ ရိုးရိုး arcade ပဲဖွဈပွီး f2p ဖွဈပါတယျ။ ကွျောငွာတှတေော့ကွညျ့ရပါလိမျ့မယျ။
First person runner ဖွဈပွီးတော့ စစခငျြးမှာ အသားကအြောငျတျောတျောလေးလုပျယူရသလိုပဲ။ motion sickness ဖွဈတတျတဲ့သူတှကေတော့ အနျကောငျးအနျနိုငျမယျထငျတယျ။ ဟေးဟေး…။ဒီတဈခုက ကြှနျတော့ အတှကျတော့ သိပျလှယျတဲ့ထဲမပါဘူး။ (ကနျြတာတှလေညျးသိပျတော့မထူးပါဘူးလေ 😛 )။ endless ပွေးနရေတာမဟုတျတာတော့ ကောငျးတယျထငျတယျ။ မိနဈပိုငျးလေးတှနေဲ့ ခှဲထားတဲ့ level တှထေညျ့ပေးထားပါတယျ။ ကွျောငွာ video တှဝေငျလာတာကတော့ နညျးနညျးအနှောကျအယှကျဖွဈတယျပွောရမယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒါတှကေိုဖယျမယျဆိုရငျလညျး $10 လောကျပေးရမှာဆိုတော့ ….ဝှူး….
ALto’s Adventure ကိုတော့ ဆော့ဖွဈခဲ့ပွီးလောကျပါပွီ။ endless runner game တဈမြိုးပါပဲ။ ဒီတဈခုက Adventure ပွီးတော့ Odyssey ဆိုပွီးထှကျလာပါတယျ။ ဒီဂိမျးထှကျလာဖို ၃နှဈအခြိနျယူခဲ့ပါတယျ။ ဒါတောငျ android အတှကျ မထှကျသေးပါဘူး။ ရကျကိုလညျးကွငွောထားတာမတှမေိ့ပါဘူး။ ပုံမှနျ comeptative mode, အေးအေးဆေးဆေး Zen mode နဲ့ photo mode ဆိုပွီးတော့ ပါပါတယျ။ လောလောဆယျတော့ $5 နဲ့ iOS အတှကျရပါပွီ။
Ski Jumping Pro ဆိုတာ အခုမှထှကျလာတဲ့ ဂိမျးတဈခုတော့ မဟုတျပါဘူး။ အရငျ 2013 လောကျကတညျးကရှိနခေဲ့ပွီးသားပါ။ 11th February ကထှကျလာတဲ့ update မှာတော့ 3D အစဈဖွဈသှားကွောငျးနဲ့ slow motion replay ပါလာပါတယျ။ gyro ဒါမှမဟုတျ touch ၂ မြိုးလုံးနဲ့လညျး ထိနျးလို့ရလာတယျ။ character customization လညျးကောငျးကောငျးလုပျလို့ရလာပါတယျ။ အခု 22nd feb မှာတော့ ဂိမျးက အတျောငွိမျသှားပါပွီ။ 1.8GB download ဖွဈပွီး f2p ဖွဈပါတယျ။ Sponsor points တှမေဝယျမခငျြးတော့ f2p ပေါ့။ ကွျောငွာကွညျ့ရငျးလညျးရနိုငျပါလိမျ့မယျ။
RPG player တှအေတှကျတော့ တကယျအဆငျပွမေယျ့ turn-based RPG တဈခုဖွဈပါတယျ။ game mechanic တှကေောငျးတာတှရေ့ပါတယျ။ ဇာတျလမျးကိုရှငျးပွသှားတာအတျောလေးအဆငျပွပေါတယျ။ Ninetail ကထုတျတာဖွဈတဲ့အတှကျ မူရငျးက ကိုရီးယားဘာသာနဲ့ပဲရနိုငျပမေယျ့ english version ထှကျလာတဲ့အခါ english ကိုတကယျတတျတဲ့သူတဈယောကျက ဘာသာပွနျပေးထားပုံရပါတယျ။ လောလောဆယျတော့ ကိုယျတိုငျလညျး level 10 ပဲရှိပါသေးတယျ။ multiplayer မရပါဘူး။ pub မှာတော့ တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ connection လညျးလိုပါတယျ။ ပြျောဖို့လညျးကောငျးပါတယျ။ grinding လညျးနညျးနညျးတော့လုပျရပါလိမျ့မယျ(RPG မဟုတျလား)။ Storage ကိုတော့ သတိထားစခေငျြပါတယျ။ မလောကျပါဘူး။ ပစ်စညျး အတျောမြားမြားက မဝယျလညျး တဖွညျးဖွညျးတော့ရလာပါလိမျ့မယျ။ Chapter တှကေ boss-based ဖွဈတဲ့အတှကျ အဲ့ဒီ boss ကိုသတျဖို့လိုပါတယျ။ မနိုငျသေးရငျ grinding ပွနျလုပျ…ပွနျခပြေါ့။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ $1 ပေးဝယျရတာကတော့ တနျပါတယျ။
ဒီတဈပတျကတော့ ဒီလောကျပါပဲ၊ တဈခွား update တှလေညျးရှိတော့ရှိပါသေးတယျ။ အမြားစုကတော့ ဆော့လကျစဖွဈကွပါလိမျ့မယျ။ နောကျတဈပတျမှပဲပွနျတှကွေ့တာပေါ့ဗြာ။
Tags android fighter iOS newrelease trailer weekly